जब क्रान्तिकारी चेतमा विचलन आउँछ, तव पार्टीले देश, जनता र क्रान्ति विरोधी काम गर्छ: मिलन — Sanchar Kendra
जब क्रान्तिकारी चेतमा विचलन आउँछ, तव पार्टीले देश, जनता र क्रान्ति विरोधी काम गर्छ: मिलन
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलन भर्खरै सकिएको छ । सम्मेलनले प्रकाश शाहीको अध्यक्षतामा ११३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ। सङ्गठनले कसरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो ? उसका आगामी योजनाहरु के छन् ? र शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित अबको आन्दोलन कस्तो हुन्छ ? भन्ने बिषयमा संगठनका महासचिव मिलन राईसँग सञ्चारकेन्द्रका निम्ति कार्यकारी सम्पादक दिया चन्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईलाई संचारकेन्द्रमा स्वागत छ ।
१- तपाईहरुले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट खास गरी कस्ता नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नु भएको छ ?
हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल(क्रान्तिकारी)को ऐतिहासिक २२औं राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ असोज ६-९ पोखरामा सम्पन्न भयो । सम्मेलनले केही नियमित र केही नयाँ परिस्थितिमा नयाँ आवश्यकता बमोजिम नयाँ नीति कार्यक्रम पारित गरेको छ। संगठनले प्रकाश शाहीको अध्यक्षतामा ११३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ, संगठनात्मक संरचनालाई प्रदेश, जिल्ला, क्याम्पस, नगर, गापा र वार्डमा लाने निर्णय गरेका छौं ।
संघर्षमा नेपालको राजनीतिक तथा शैक्षिक मुद्दामा विद्यार्थी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउदै वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको प्राप्तिका लागि संघर्षका साथै दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको पक्षमा दृढतापुर्वक संघर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ र १५ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै संघर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ, जुन पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको छ।
राजनीतिक वैचारिक अन्तर्गत २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको प्रारम्भिक अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै नियमित प्रकाशन गर्ने, स्कुलिङ/प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने लगायतको निर्णयहरु भएका छन्। त्यस्तै विशेष काम अन्तर्गत संगठनका हरेक समितिले उत्पादन कार्य गर्ने, संगठनको आफ्नै वेबसाइट सञ्चालन गर्ने , सहिद-बेपत्ता योद्धाहरुको स्तम्भ निर्माण गर्ने लगायतको निर्णय गरिएको छ । ऐतिहासिक २२औं राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको नीति कार्यक्रम मुलतः यिनै हुन आवश्यकतामा थप व्याख्या गर्दै लगिनेछ।
२- तपाईहरुले शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने माग उठाउदै आउनुभएको छ ! ठोस-ठोसमा भनिदिनुहोस की परिवर्तनका लागि के-के बिषय प्राथमिकतामा पर्छन ?
हो, हामीले संगठनको स्थापनाकालदेखि नै शिक्षामा आमूल परिवर्तनको नारा उठाउदै आएका छौं र शिक्षामा आमूल परिवर्तनको नारामा मूलभूत रुपमा सबै विद्यार्थी संगठनको सहमति पनि छ । तर हाम्रो उक्त माग हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । व्यवस्थाको नाम फेरियाे, पात्र फेरिए तर शिक्षामा समानता र आमूल रुपान्तरण हुन सकेन, बरु अझ नयाँ स्वरुपमा शोषणहरु बढेका छन्, शैक्षिक असमानता नयाँ स्वरुपमा बढ्दो छ, आम नागरिकको पहुँचभन्दा शिक्षा टाढाको विषय बनिरहेको छ। विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरू राज्यको नीति निर्माणको तहमा नपुगेका पनि होइनन् तर समस्या उस्तै छ अझ भनौं बढेर गएको छ। यसर्थ हामी के निश्कर्षमा पुगेका छौँ भने राज्य सत्ताको चरित्र नबदलिँदासम्म शिक्षाको मूल चरित्र बदलिदैन तसर्थ शिक्षाको आमूल रुपान्तरणको लागि राज्यसत्ताको मूल चरित्र बदल्न संघर्ष गर्नुपर्दछ।
३- तपाईहरुले भनेको बैज्ञानिक शिक्षा कस्तो हो ? त्यसमा आधारभूत बर्गले कसरी सहज पहुँच पाउछ ?
सीप, श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको जीवनउपयोगी, वैज्ञानिक, नि:शुल्क र समान शिक्षा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा हो। जसले नागरिकलाई सहि शिक्षा, चेतना र ज्ञान दिन्छ, जनताको जीवनलाई सुख र उन्नतितिर डोर्याउँदछ र जनतालाई शोषणरहित मुक्त, समान,नयाँ वैज्ञानिक भविष्यतर्फ अग्रसर गराउँदछ। वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षामा पहिलो विद्यार्थी र शैक्षिक संस्था स्वयं उत्पादक शक्ति हुने गर्छ, दोस्रो शिक्षाको सम्पुर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्दछ र समानता अनिवार्य सर्त हुन्छ। यसर्थ वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षामा आधारभूत वर्गको मात्र होइन सबै जनताले समान पहुँच राख्ने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ ।
४- नेपालमा पछिल्लो पटक झन् झन् शिक्षाको ब्यापारीकरण हुदै गइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईहरुको संगठनले कस्तो नीति अबलम्बन गरिरहेको छ ?
हो तपाईले उठाउनु भएको विषय सत्य हो । शिक्षाको नामुद व्यापारी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएको दृष्टान्त हामीले भर्खरै देखेका छौँ । शिक्षाको व्यापारबाट कमाएको अकुत पैसा खर्च गरेर सांसद बनेर नीति निर्माण तहमा शिक्षाका व्यापारीहरुको हस्तक्षेप गरिरहेको पनि हामीले देखिरहेका नै छौँ । त्यति मात्र होइन, मन्त्री फेर्ने, मन्त्रालयका सचिव फेर्ने ध्वाँस पनि कहिलेकाँहि सुन्न पाइन्छ । अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भन्दा समाजवादको पक्षधर भनाउँदा कथित कम्युनिस्टहरुको झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढि शिक्षाको व्यापारमा लगानी छ।
नेपालको मूल आर्थिक चरित्र दलाल पूँजीवादी छ, दलाल पूँजीवादले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दछ, त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय पूँजीलाई निरुत्साहित गरेर विदेशी पूँजी भित्र्याउछ अनि नीति निर्माणको तहबाट संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दछ। यसो हुनुले शिक्षामा व्यापारीकरण र विदेशी लगानी बढिरहेको छ। शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको समस्याको दिर्घकालिन हल राज्यको दलाल पूँजीवादी आर्थिक चरित्र बदलेर समाजवादी आर्थिक चरित्र स्थापित नगर्दासम्म यो हुन सक्दैन।
तथापि तत्कालीन हिसाबले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणकाविरुद्ध निरन्तर र सम्झौताहिन निर्मम संघर्षको विकल्प छैन। निजीकरण र व्यापारीकरण विरुद्ध संघर्ष गरेर मात्र पुग्दैन, सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । तसर्थ हाम्रो हरेक सदस्य र हरेक इकाईलाई सामुदायिक सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा पहल लिन निर्देशन गरिनेछ र संगठनमा मुल्यांकनको मापदण्ड बनाइनेछ । साथै हाम्रा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, जनता सबैलाई सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनुरोध रअपिल गरिनेछ ।
५- तपाईहरुको संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ‘सडकको बाघ’ संगठनको रुपमा रहेको भनिएको थियो तर शैक्षिक आन्दोलनमा कम र पार्टीको राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ! के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो गौरवशाली संगठन हिजो मात्र होइन आज पनि प्रतिपक्षी विद्यार्थी आन्दोलनको सडक बाघ हो भन्ने हाम्रो दाबी छ। प्रतिपक्षी विद्यार्थी आन्दोलनको नेता संगठनको रुपमा विचार, दृष्टिकोण र पहलका आधारमा हाम्रो संगठनले नेतृत्व गरिरहेको छ। जहाँसम्म तपाईंको प्रश्न छ, शैक्षिक आन्दोलनमा कम र राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यादा भन्ने त्यो सत्य होइन । राजनीतिक आन्दोलनको सफलता बिना शैक्षिक आन्दोलनको ठोस परिणाम नदेखिने हुदा हाम्रा प्रयत्न, पहल र संघर्ष ओझेलमा परेका हुनसक्छन् । फेरि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने शैक्षिक आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग गरियो भने त्यो सुधारवादमा फस्छ र त्यसले शिक्षामा आमूल रुपान्तरण गर्न सक्दैन । तसर्थ राजनीतिक आन्दोलनको सफलतासंग शिक्षामा आमूल रपान्तरणको विषय अन्तरसम्बन्धित हुने हुँदा शैक्षिक आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनसंग एकाकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यद्यपि विद्यार्थी आन्दोलनको चरित्र अनुसार विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरुमा शैक्षिक संघर्ष गरिरहनुपर्दछ ।
६- तपाईहरुको संगठनका नेताहरु पनि अरु पार्टी-संगठनका नेताहरु जस्तै शैक्षिक माफियाहरुसंग आर्थिक लाभ लिएर विद्यार्थीका जायज मागसहितको आन्दोलन तुहाउन लागिपरेको आरोप पनि थियो ! के यो साँचो हो ?
यो कुरा सत्य होइन । यदाकदा छिटफुटरुपमा त्यस्ता प्रवृति देखिँदा हाम्रो संगठनले तत्काल कारवाही गर्ने गरेको छ । त्याग, समर्पण र बलिदानको जगमा स्थापित हाम्रो संगठन यो देशको सबैभन्दा क्रान्तिकारी र जुझारु संगठन भएको हुनाले आर्थिक लाभ लिएर विद्यार्थी आन्दोलन तुहाउने प्रवृतिलाई कडाइपुर्वक निषेध गरिएको छ। यदि त्यस्तो कोही कसैमा देखिएमा तत्काल कडा भन्दा कडा कार्बाही गरिनेछ । जहाँसम्म आरोपको कुरा छ त्यो एउटा, शुभचिन्तक, समर्थकहरु अरु विद्यार्थी संगठनमा त्यस्तो समस्या छ । हाम्रो संगठनमा त्यस्तो प्रवृतिले ठाउँ नपाओस भनेर गरिएको खबरदारी र चिन्ता हुनसक्छ र अर्को, संगठनको लोकप्रियता र पहलसँग आत्तिएर नियोजितरुपमा गरिएको हल्ला पनि हुनसक्छ । त्यस्तो अफवाह र हल्लाको पछि कोही लाग्नु हुदैन।
७-अहिलेको सम्मेलनबाट निर्वाचित भएको कार्य समिति र बिगतको कार्यसमितिमा के फरक छ ? नेतृत्व छनोटमा हललाई जनवाद दिइएको हो ?
पुरानो कार्यसमितिको ठाउँमा नयाँ कार्यसमिति आएको छ। नयाँ कार्यसमितिमा अनुभवी र नयाँ प्रतिभाहरुको समिश्रण छ। हलमा नीति कार्यक्रम र नेतृत्वको विषयमा व्यापक जनवाद प्रदान गरिएको थियोे र प्रयाप्त छलफलहरु भएका छन्। नयाँ कार्यसमिति बन्द सत्रको हलबाटै सर्वसम्मत निर्वाचित भएको हो।
८- अनि तपाईहरु अहिलेको समयमा कुन बिषयलाई कसरी उठान गर्ने र आन्दोलन कुन बाटोबाट अगाडी बढाउने भन्नेमा अलमलमा देखिनुहुन्छ भन्ने पनि छ, के भन्नुहुन्छ ?
होइन हामी अलमलमा छैनौं। हामीलाई लाग्छ समग्र आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम भएको संगठन हाम्रो मात्र हो। एकथरी विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक आन्दोलन पूरा भएको पनि भनिरहेका छन् तर जनताको जनजीविका, राष्ट्रियता लगायत आधारभूत कुराहरूको समस्या यथावत रहेको विषय पनि स्वीकार गर्न बाध्य छन् । यसरी हेर्दा उनीहरु अहिलेको परिस्थिति र निश्कर्षका बिचमा अलमलमा छन् र उनीहरुको आन्दोलन पनि अलमलमै देखिन्छ तर हामी नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा नभएको र जनताको समस्याहरु यथावत रहेको, अझ भनौं बढेको विषयमा स्पष्ट छौं । हाम्रो आन्दोलन विचार दृष्टिकोणका हिसाबले स्पष्ट भएर अघि बढिरहेको छ। हाम्रो संगठनको अझ सशक्त र प्रभावकारी भुमिकाको जनताले गरेको अपेक्षाको सन्दर्भमा भने हामी सचेत छौं ।
९- अनि अर्को कुरा ! तपाइहरुले गर्ने भनिएका प्राय आन्दोलन प्रचारमुखी मात्र हुने तर परिणाममुखी नहुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, अब त्यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?
विद्यार्थी आन्दोलनको खास परिणाम राज्यसत्ताको आमूल परिवर्तनसंगै शिक्षाको आमूल रुपान्तरण भएपछि देखिन्छ। हाल भइरहेको आन्दोलन यथास्थितिमा सुधार र आमूल रुपान्तरणको लागि सहयोगी आन्दोलन हो । सुधारका लागि गरिएका आन्दोलनहरुले परिणामहरु ल्याएकै छन् बरु हाम्रो प्रभावकारी प्रचारको अभावमा जनता र मिडियालाई जानकारी नभएको हुनसक्छ । हामीले गर्ने हरेक आन्दोलन परिणाममुखि बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । प्रचार पनि आन्दोलनकै एक हिस्सा हो बरु हामीले गरेको प्रयत्न र पहललाई व्यापक प्रचार गरेर जनतालाई सचेत गराउन ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले जनताको सबैभन्दा बढी आशा अपेक्षा भएको हुनाले अपेक्षामा अझ बढी खरो उत्रियोस भन्ने भावनाबाट गरिएको प्रश्नप्रति हामी सकारात्मक र जिम्मेवार छौं ।
१०- विद्यार्थी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका धेरै मान्छेहरुलाई लाग्ने एउटा कुरा के हो भने तपाईहरुको संगठन पार्टीको ह्विपभन्दा माथि उठेर बिशुद्ध बिद्यार्थीका मुद्दामा मात्रै केन्द्रित आन्दोलन गर्न सक्छ या सक्दैन ?
क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास हेर्दा जब-जब पार्टी, देश र जनताको मुक्तिका लागि क्रान्तिको पक्षमा हुन्छ त्यतिबेला विद्यार्थी आन्दोलनले क्रान्तिको मोर्चामा अग्रदस्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै बलिदान समेत गरेको छ। जब क्रान्तिकारी चेतमा विचलन आउँछ, देश र जनताको हित विपरीत र क्रान्ति विरोधी पार्टीले काम गर्छ तब विद्यार्थी आन्दोलनले सशक्त प्रतिरोध र विद्रोह गरेको छ। हाम्रो गौरवशाली संगठन त्यही क्रान्तिकारी जुझारु विरासत बोकेको संगठन हो, यसर्थ पार्टी क्रान्तिको मार्गमा हुदाफँसम्म अग्रदस्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यदि पार्टीले क्रान्तिको मार्ग छोडेमा प्रतिरोध र विद्रोह गर्नेछ।
११- अन्त्यमा भन्नैपर्ने केहि कुरा छ ?
विद्यार्थी साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहान्छु, यो समय निराश भएर कुण्ठा पोखेर बस्ने समय होइन। नयाँ क्रान्तिका लागि नयाँ खोज,अनुसन्धान गर्दै जिम्मेवारीमा मेहनत गर्ने समय हो। संकट र अवसर अस्थायी कुरा हुन, स्थायी समाधान क्रान्ति हो । हामीले देखेको शिक्षामा आमूल रुपान्तरणको सपना वैज्ञानिक समाजवादको प्राप्तिसंगै पूरा हुनेछ । तसर्थ वैेज्ञानिक समाजवादका लागि एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध बनौं ! मानव जातिको सुनौलो भविष्य सन्निकट छ।
समय र संवादका लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
तपाईको लोकप्रिय मिडियामार्फत मलाई हाम्रो संगठनको विषयहरु राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईको मिडियालाई आभारसहित धन्यवाद ।
संसद्‍बाट बिदा हुन तयार छु, राजीनामा माग्ने यस्तालाई जनताले दण्डित गर्छन्- प्रधानन्यायाधीश जबरा
केछ विद्रोही नेकपाको आगामी योजना ? विशेष अन्तर्वार्ता मार्फत विप्लवले गरे यस्तो खुलासा